Dekadda Muqdisho oo ku soo xirtay markab laga leeyahay Imaaraatka Carabta • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dekadda Muqdisho oo ku soo xirtay markab laga leeyahay Imaaraatka Carabta
Dekadda Muqdisho oo ku soo xirtay markab laga leeyahay Imaaraatka Carabta
Dekadda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in uu ku soo xirtay markab laga leeyahay Imaaraadka Carabta , kaasi oo lagu wado in lagu raro alaab ay leedahay Imaaraadka oo maalmihii la soo dhaafay laga soo daabulayay xarumaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in alaabo waaweyn oo ay ku jiraan kunteenaro lagu rari doono, kuwaasi oo ka mid ahaa agabyo ay Imaaraadka Carabta kala baxayaan magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiinta Safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in maamulka dekedda ay u gudbiyeen warqad ogolaansho ah oo laga soo siiyay wasaaradda amniga, taasi oo loogu fasaxay inay rartaan alaabtooda.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa la arkayay gaadiidka xambaara kunteenaro oo agabyo ka raraya xerada tababarka ee Jeneraal. Gordon ee ku taal degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Agabyadii u yaalay xerada tababarka ee Jeneraal. Gordon iyo alaabihii yaalay xarumaha caafimaadka ayaa sidoo kale la sheegay in la isugu geeyay xarunta safaaradda ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu wado in dhowaan laga qaado, lana geeyo dekedda magaalada Muqdisho, si loogu raro Markabka taagan dekadda.
Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta xiriirka u dhexeeyey ayaa xumaaday, taasi oo keentay in Imaaraatka Carabta uu joojiyo taageeradii uu siin jiray Soomaaliya.